"ချန်ဖူးပရိသတ်လေးတွေကို သတိရလို့ သူမအကောင့်ကို ပြန်သုံးနေတဲ့ ခြူးလေး" - Cele Connections
“ချန်ဖူးပရိသတ်လေးတွေကို သတိရလို့ သူမအကောင့်ကို ပြန်သုံးနေတဲ့ ခြူးလေး”
MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ ” ရွှေဖူးစာဆုံရာမြေ”ဇာတ်ကားတွင် ချိုချိုချစ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးအဖြစ် ခြူးလေးကိုတော့ CeleConnections ပရိသတ်တွေနဲ့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ခြူးလေးကတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းလိုလို ကာရိုက်တာပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ဆိုလည်း မမှားလောက်ပါဘူးနော်။ သူမဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာရော ဂီတပိုင်းမှာပါအောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခြူးလေးကတော့ အိမ်မှာနားနေရင်း သူမရဲ့ချန်ဖူးလေးတွေအတွက် အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ Tik tokဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ခြူးလေးက”ဟဲ့ hi ငါနင့်ဆီလာနေပြီ မင်းကလေးလေးဟုတ်တယ်မလား? အရမ်းသတိရတယ်၊ ချန်ဖူးလေးတို့ “လို့ဆိုကာ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမခန Fbသုံးတာ ရပ်နားလိုက်ပေမယ့် ချစ်ရတယ်ချန်ဖူးလေးတွေကို သတိရကြောင်း တင်ပေးလိုက်တာပါပဲနော်။
CeleConnections ပရိသတ်တွေအတွက် ခြူးလေးရဲ့ သတိရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြန်လည်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ချန်ဖူးလေးတို့ကလည်း ခြူးလေးလိုဘဲ သတိရကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Soure…Chue Chue ‘s Facebook
“ခနျြဖူးပရိသတျလေးတှကေို သတိရလို့ သူမအကောငျ့ကို ပွနျသုံးနတေဲ့ ခွူးလေး”
MRTV-4 ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲဖွဈတဲ့ ” ရှဖေူးစာဆုံရာမွေ”ဇာတျကားတှငျ ခြိုခြိုခဈြအဖွဈသရုပျဆောငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးအဖွဈ ခွူးလေးကိုတော့ CeleConnections ပရိသတျတှနေဲ့ အထူးတလညျ မိတျဆကျပေးဖို့မလိုလောကျဘူးထငျပါတယျ။ ခွူးလေးကတော့ ဇာတျကားတိုငျးလိုလို ကာရိုကျတာပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးတဈလကျဆိုလညျး မမှားလောကျပါဘူးနျော။ သူမဟာဆိုရငျ သရုပျဆောငျမှုပိုငျးမှာရော ဂီတပိုငျးမှာပါအောငျမွငျနတေဲ့ အဆိုတျောတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။
ခွူးလေးကတော့ အိမျမှာနားနရေငျး သူမရဲ့ခနျြဖူးလေးတှအေတှကျ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့ Tik tokဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ခွူးလေးက”ဟဲ့ hi ငါနငျ့ဆီလာနပွေီ မငျးကလေးလေးဟုတျတယျမလား? အရမျးသတိရတယျ၊ ခနျြဖူးလေးတို့ “လို့ဆိုကာ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ သူမခန Fbသုံးတာ ရပျနားလိုကျပမေယျ့ ခဈြရတယျခနျြဖူးလေးတှကေို သတိရကွောငျး တငျပေးလိုကျတာပါပဲနျော။
CeleConnections ပရိသတျတှအေတှကျ ခွူးလေးရဲ့ သတိရတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ပွနျလညျပွီး မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ ခနျြဖူးလေးတို့ကလညျး ခွူးလေးလိုဘဲ သတိရကွမယျလို့ ထငျပါတယျ။
” မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးမှာ ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းခဲ့တဲ့ ခင်ပိုးပန်းချီ “
(၁၉)နှစ်ညီလေးက ကားအက်ဆီဒင့်ကြောင့်ဆုံးသွားတဲ့အပြင် ဖခင်ကလည်း အကောင်းကြီးကနေ တစ်ပတ်အတွင်းကွယ်လွန်သွားလို့ လောကဓံကိုကြောက်နေပြီဆိုတဲ့ ထူးပိုင်ဇော်ဦး
” ကြိုက်တတ်တာလေးတွေကို မှတ်ထားပြီး အိမ်အရောက် မှာပို့ပေးနေတဲ့ တစ်ယောက်သောသူကြောင့် ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး”